ကြယ်သီးတိုင်းပြည် (ရွှေသွေးဂျာနယ်) စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၁၉၇၈ | MoeMaKa Burmese News & Media
Tags: တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း, ဦးဘကြည်အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Cartoon Box, ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း	3 Responses to ကြယ်သီးတိုင်းပြည် (ရွှေသွေးဂျာနယ်) စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၁၉၇၈ Angel on April 17, 2013 at 12:20 pm ငယ်ငယ်တုံးကဥနှောက်ထဲမှာစွဲကျန်ရစ်ခဲ့သော ကာတွန်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။အခုလိုပြန်ဖတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Maung Maung on April 17, 2013 at 9:55 pm ဖတ်ဖူးရုံသာမက တချို့ရွှေသွေးစာစောင်များပါ ကိုယ်ပိုင်စာအုပ်စင်တွေမှာရှိကြောင်းပါဗျား။
nga gynn on April 20, 2013 at 5:34 pm thanks. It is still fresh in my memory.
တူမောင်ညို - သင်္ကြန်အမြောက်သံမဟုတ်မှသာ အာဏာရအုပ်စုက လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားမှာပါ	အိုဘယ့် မြို့တော်	ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း - ဥပဒေအရ	စိုးနေလင်း - ငါတို့သမိုင်း အရိုင်းမခံ	ဖိုးထက် - စိတ်ဖြောင့်စွာ စာဖတ်ပါရစေ	ခင်လွန်း - ချစ်သူများသို့ ပြန်စာ	ဇာနီကြီး - အေရှားဝေါ	ကာတွန်း အောင်မော် - လေခွန်	ဆောင်းလူ - အပြာကား	ကာတွန်း ဇာနည်ဇော်ဝင်း - နီးလာလေလေ ...	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများလုပ်ငန်းရှင် ခရိုနီ ဇော်မိုးခိုင် အာဏာပိုင်နဲ့ ပေါင်းပြီး ပြည်သူကို မတရားကျင့်
Hle Dan Residence denounced Crony Business Owner
စာပဒေသာ ကောက်စာများဘု ရား
ဆောင်းလူ - ငါ ... အကောင်
အုန်းနိုင် - ၁၉၉၁ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း (၃)
သမိုင်းမျက်ရည်စများနှင့် ... ဇူလိုင်
Cartoon Box (1,540)